Mogadishu Journal » Xukuumada Soomaaliya oo sheegtay in ay go’aan ka qaadaneyso dadka degan xarumaha dowladda
Xukuumada Soomaaliya oo sheegtay in ay go’aan ka qaadaneyso dadka degan xarumaha dowladda
Mjournal : — Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in ay go’aan ka qaadan doonto dadka wali degan xermuha dowladda,gaar ahaan kuwa dadka shacabka ah ka kireeya guryaha ay ku leedahay dowladdu magaalada Muqdisho.
C/llaahi Ciilmooge Xirsi wasiirrka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta, oo warbaahnta la hadllay ayaa sheegay in kulan degeg ah oo arrintan looga hadlayo ay golaha wasiirradu isugu imaan doonaan maalinta Axada ee nagu soo foolka leh.
“Runtii waa wax aad looga xumaado in ay wali jiraan dad degan xurmaha, iyadoo marar badan dadkaa looga digay laguna war-galiyay in ay baneeyaan, waxaana golaha wasiiradda ay arrintaas ka soo saari doonaan go’aan deg deg ah,” ayuu yiri wasiirka oo sheegay in shirka golaha wasiirradu ay yeelan doonaan looga hadlayo arrintan.
Xukuumada federaalka ayaa marar badan ku cel celisay uguna baaqday dadka wali degan xurmaha dowladda in ay baneeyaan, waxaase wasiirku uu sheegay in guryaha dhisan ee dowladda ay khasab tahay in gacanta dowladda dib loogu soo celiyo.
“Mar walba dowladda waxaa ka go’an inay guryaheeda dib ula laabato, balse dhulalka ay daggan yihiin dadka shacabka ah ee aan xilligan loo baahnayn siyaasad cad ayaa loo dajin doonaa,” ayuu wasiirku hadalkiisa ku daray.
Laga soo bilaabo tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991-kii waxaa jiray dad shacab ah oo la wareegay guryaha ay dowladdu leedahay, kuwaasoo ay qaarkood guryaha dowladda sii kireeyaan si ay lacag uga helaan.
Hay’addaha nabad-galyad oo kaashanaya dowladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu danbeeyay ka wadaya magaalada Muqdisho olole dhulka dowladda looga saarayey dadka degen, balse madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay inay ka laabteen go’aankaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid khaldan.
Wasiirrka gaashaandhiga iyo wafdi uu hogaaminayo oo u safray dalka Jabuuti